Har’a waa’ee jijjiirama, kalaqaa fi fudhannaa dubbachaa jirra. – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Har’a waa’ee jijjiirama, kalaqaa fi fudhannaa dubbachaa jirra.
Bara 1970moota keessa Xaaliyaanii keessatti tv halluu qabu yeroo bahu, aanga’oonni naannoo TV’n irra caalaan isaanii qorannoo gahaa hin hojjenne, namoota ilaalan irratti miidhaa geessisuu danda’u jechuun haqaniiru. Tarii sirrii turan ta’a, tarii hin ta’u ta’a. Dubbiin jiru teknooloojii jeequmsaa mootummaan waan isaan hin hubanneef to’achuuf yaale ta’uu isaati.
Fakkeenyi biraa immoo interneetii dha.
First considered a “passing fad” , sana booda massively fudhatame hundumaa nama bilbila ismaartii ykn laptop jecha guutuu keessatti.
Bill Gates gaaffiifi deebii David Letterman Show irratti godhe irratti interneetiin maal akka ta’ee fi akkamitti addunyaa kana jijjiiruuf akka jiru waan ibsaa tureef akka itti qoosan nan yaadadha.
Bill: “[Intarneetiin] bakka namoonni odeeffannoo itti maxxansan […], iimeelii elektirooniksii erguu danda’an ta’aa jira…”
Gaaffii fi deebii: “ji’a lama dura beeksisni guddaan boqonnaa haaraa tokko ture interneetii irratti […] tapha beeysiboolii tamsaasuuf akka jiran […] ani immoo ofumaan “raadiyoon bilbila bilbilaa?” “…..
Biil: “Yeroo barbaaddetti dhaggeeffachuu dandeessa”
Gaaffii fi deebii: “Meeshaaleen teeppii waraabbii bilbila ni bilbilaa?”
… fi kkf. Dhugaa dubbachuuf ilaaluun nama dhukkubsa ture, garuu Biil kolfaa ture. Isa waliin osoo hin taane isa irratti.
Kanaan garamitti akkan deemu beekta, garuu akka ifa ta’e gochuu barbaada.
Yeroo kalaqoonni gurguddoon hirmaatan hundatti namoonni akka sodaatan gad of qabuun nan amana.
“Jijjiiramni” waan nama sodaachisuuf namoonni haala jiru ittisuuf ni yaalu. Hojii jijjiiruun, mana jijjiiruun, hiriyaa gaa’elaa jijjiiruun (lol) miira sodaachisaadha sababiin isaas nageenya barbaadnee naannoo mijataa keenya keessa turuuf sagantaa waan qabnuufi.
Abbootiin keenya holqa gaarii, madda nyaataa baay’ee qabu yoo argatan, nyaata isaanii itti aanu mirkaneessuuf “naannoo mijataa isaanii keessaa ba’anii” leencota tokko tokko loluun isaan hin barbaachifne.
Jijjiiramni sodaachisaa waan ta’eef teknooloojiin kun hubachuun nama rakkisa. Namoonni tokko tokko hubachuuf yaalaa jiru, garuu dhugaa dubbachuuf akka si’oolitti ulfaataadha. Bakka kana keessa waggoota dheeraaf ture ammas guyyaa guyyaan waan haaraa barachaa jira.
Mala waliigaltee haaraa, gosoota blockchain adda addaa, validators, delegators, miners, has rate, incentives, oracles, etc.
Kunis namoonni baay’een humna sammuutti fayyadamuun hubachuu waan hin barbaanneef qofa brush off godhu jechuudha.
Mee kana sirriitti haa hubadhu: barachuu dhiisuun guutummaatti OK dha. Imeelii akkamitti akka hojjetu hin beeku ammas guyyaa guyyaan itti fayyadama.
Intarneetiin qabatamaan akkamitti akka hojjetu hin beeku ammas, ammas, guyyaa guyyaan itti fayyadama.
Bilbila, ergaa barreeffamaa, TV fi kkf irrattis kanuma.
Kana jechuun, teknooloojii haaraa barachuuf yeroo fudhata kanaafis namoonni rifachaa jiran.
Namoonni baay’een waan isaan hin hubanne waan hin jaallanneef qofa brush off godhu, hanga dhuguma maaltu duuba jiru osoo hin beekin teknooloojii fayyadamuu jalqabuu akka danda’an hubatanitti.
Ammas dafnee jirra jedheen amana. Har’a irraa eegalee fayyadamaan giddu galeessaa boorsaa qopheessuu, gaalee sanyii barreessuu, pirootokoolota faayinaansii giddugaleessa hin taane irratti bobba’uun, $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, sana booda dhiyeessaa staking sirrii argachuu, sana booda boorsaa gidduutti mallattoo erguu fi kkf baay’ee rakkisaadha.
Akkuma amma jirutti namoota biliyoonaan lakkaa’aman hawwachuuf hin kaa’amne, kunis waan gaarii dha. Dhaabbileen maamila giddugaleessa godhachuu fi muuxannoo irratti xiyyeeffachuu erga jalqabanii booda namni hundi qaama isaa ta’uu waan barbaaduuf waan gaarii dha.
Dhaabbileen haaraan blockchain irratti ni dhalatu, tajaajilli haaraan ni kennamaaf. Web3 hunduu humna dhaabbilee gurguddoo irraa gara fayyadamtootaatti jijjiiruu yoo ta’u ija keenya duratti ta’aa jira.
$BTC fi $ETH invastimantii waggaa 1 miti. Teeknooloojiiwwan kun addunyaa akka nuti beeknutti ni jijjiiru, namoota wal fakkaatu kanneen addunyaa qaala’iinsa jireenyaa fiat irratti hundaa’e irraa baay’ee fayyadamoo ta’an irraa mormii ni argatu.
Waggoota kurnan dhufaniif fi tarii sanaa ol illee kirpitoo armaan olitti ibsame kana daldaluu fi invast gochuuf fedhii qaba.
Kun hundi yoo jedhame, kirpitoon hundi tokko miti, akkuma istookiin hundi tokko hin taane.
BTC fi TurtleCoin wal bira qabuun akka $TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) fi Theranos wal bira qabuuti. Akkasumas sababni Theranos ticker hin qabneef jira.
Fitted 3-Layer, Kophee Abbaa, Deeskii Mat, Haguugduu Daa’immanii, Maagneetii, Kophee Beeysiboolii, Paadiin Hantuutaa, Mat Saree, Baandaana Beeyladaa, Fuula Beeyladaa, Mat Saree, T-Shirt Sochii Qabu, T-Shirt Beeysiboolii 3⁄4 Harka, T-Shirt Klaasikii , T-Shirt Giraafiksii, Hoodii Salphaa, Sweatshirt Salphaa, T-Shirt Harka Dheeraa, T-Shirt Dheeraa, T-Shirt Premium, Hoodii Pullover, Sweatshirt Pullover, Taankii Racerback, Gubbaa Harka Hin Qabne, T-Shirt Barbaachisaa, Taankii Top, Tri -blend T-Shirt, T-Shirt V-Neck, Hoodie Zipped, Uffata Sarara A, Gubbaa Chiffon, T-Shirt Scoop walsimsiisu, T-Shirt walsimsiisu, T-Shirt V-Neck walsimsiisu, Uffata T-Shirt Graphic, Leggings , Mini Skirt, T-Shirt Premium Scoop, T-Shirt Relaxed Fit, Istikaara, Istikaara Ifa, Gogaa Laaptooppii, Harka Laaptooppii, Istikaara Iftoomina qabu, Gogaa iPad, Keessii iPad Snap, Gogaa iPhone, Keessii iPhone Snap, Keessii Lallaafaa iPhone, iPhone Tough Keessii, Wallet iPhone, Gogaa Samsung Galaxy, Keessii Samsung Galaxy Snap, Keessii lallaafaa Samsung Galaxy, Keessii Jajjaboo Samsung Galaxy, Maxxansa Boordii Aartii, Maxxansa Aartii, Maxxansa Kanfaasiin Irra Kaa’ame
Tags: AEDAfgaanistaan ​​AfgaanistaanAFNalbuudaaALLaltcoinaltcoinsAMDANGAngoolaa KwanzaAOAAriary MaalaagaasiiARSAruban FlorinAUDAWGAZNBaalboo PaanaamaanBaat TaayilaandBAMBBDBCHBDTBGNBHDBIFBinance USDBirrii ItoophiyaabitcoinblockchainBMD . Doolaara KanaadaaBooliivar Soberano VeenzuweelaaCDFCFA Franc BCEAOCFA Franc BEACCFP FrancCHFCLFCLPCNYCOPCRCCUPCVECZKDaalaasii GaambiyaaDAIdaldalaaDeenaar MaqedooniyaaDiinaara AljeeriyaaDiinaara BaahireenDiinaara IraaqDiinaara JoordaanDiinaara KuweetDiinaara LiibiyaaDiinaara SarbiyaaDiinaara TuuniziyaaDiraamaa ArmeeniyaaDirham MorookooDirham UAEDJFDKKDOGEdogecoinDoolaara AmeerikaaDoolaara Ameerikaa GeminiDoolaara AwustiraaliyaaDoolaara BaahaamaaDoolaara Baha KaaribiyaanDoolaara BarbaadiyaaDoolaara BeeliizDoolaara BermudaanDoolaara FiijiiDoolaara JaamaayikaaDoolaara LaayibeeriyaaDoolaara NaamibiyaaDoolaara Niiwu ZiilaandDoolaara Niwuu TaayiwaanDoolaara Odoola KeeymaanDoolaara Odoola SolomoonDoolaara SingaapoorDoolaara SurinaamDoolaara Triniidaad fi ToobaagooDoolaara ZimbaabuweeDoong VeetnaamDOPDZDEGPETBethetherethereumEURFiraankii JibuutiiFiraankii KoomooriyaaFiraankii KoongooFiraankii RuwaandaaFiraankii SiwiizarlaandFJDFKPGBPGELGHSGiildirii Antiili NezerlaandGuwaaranii PaaraaguwayIDRILSINRinvastimantiiIQDIRRISKIskudoo Keep VerdeJEPJMDJODJPYKESKGSKHRKiip Laa’oskirpitookirpitoopaankiiKMFKolon Koostaa RiikaaKolon SalvaadorKordoobaa NikaraaguwaaKoroonaa DeenmaarkKoroonaa SiwiidinKorunaa CheekKPWKróna AayislaandiKroonii NoorweeyKRWKunaa KirooshiyaaKwaacha MaalaawwiiKwaacha ZaambiyaaKWDKYDKZTLaarii JoorjiyaaLAKLBPLek AlbaaniyaaLesot ho LootiiLeu MoldovanLiiraa TurkiilitecoinLKRLRDLSLltclydmaallaqaMaallaqa Bitkoyinmaallaqa callaamaallaqa kirpitoomaallaqa kirpitoo sMADManat AzarbaajaanManat TurkmenistaanMarfame BTCMasrii PaawundiiMDLMeetii (troy ounce)Meksikoo PeesooMetical MozambicanMGAMKDMMKMNTMOPmotoroota teslaMRUMURMVRMWKMXNMyanma KyatMYRMZNNaayiraa NaayijeeriyaaNADnerdNGNNgultrum ButaanNIONOKNPRNuevo Sol PeeruuNZDOMROuguiya MooriitaanPa?angaa TongaanPaaksoos Istaandardii USDPaapuwa Niwu Giinii KinaaPaataakaa MakaaniiPaawundii IsteerliingiPaawundii JerseyPaawundii Jibraaltar . Forint HaangaariiPaawundii LibaanosPaawundii Odoola FooklaandiPaawundii Seent HeelenaaPaawundii SooriyaaPaawundii SudaanPABPAXPeesoo ArjentiinaaPeesoo ChiiliiPeesoo DoominiikaaPeesoo FiliippiinsiiPeesoo KolombiyaaPeesoo KuubaaPeesoo UraagaayPENPGKPHPPKRPLNPYGQARRaandii Afrikaa KibbaaRiivniyaa YugaandaaRinggit MaaleeziyaarippleRiyaal IraanRiyaal OmaanRiyaal QaataarRiyaal Sa'uudiiRiyaala YamanRONRoomaaniya LeuRSDRUBRufiyaa MaaldiiviyaaRuubilii BeelaaruusRuubilii RaashiyaaRuupii HindiiRuupii MoorisiyaaRuupii NeeppaalRuupii PaakistaanRuupii SiisheeloosRuupii SiriilaankaaRuupiyaa IndooneezhiyaaRWFSaa’oo Toomee fi Prinsiip Doo brasaantimaSaantima USD Geengoosarsatoshisatoshi nakamotoSBDSCRSDGSeedii GaanaaSeeraaliyoon LiyoonSEKSGDShekel Israa'elSHIBShiba InuShilingii KeeniyaaShilingii SomaaleeShilingii TaanzaaniyaaShilingii YugaandaaSHPSLLSom KirgistaanSOSSRDSTNSVCSwaazi LiilaangiiniiSYPSZLTaajikistaan SomoniTaakaa BaanglaadeeshTaala Saamo’aaTeengee KaazaakistaanteslaTHBTJSTMTTNDTOPTRYTTDTugrik MongolianTWDTZSUAHUGXUSDUSDCUYUUzbeekistaan ​​SomUZSVaanu'aatuu VaatuuVESVNDVUVWBTCWoon Kooriyaa KaabaaWoon Kooriyaa KibbaaWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYeen JaappaanYERYuunitii Herregaa Chiilii (UF)Yuuroo zoonii YuurooYuuwaan ChaayinaaZARZlootii PoolaandiZMWZWL
June 12, 2022 by admin Oromo - Afaan Oromoo 0
Next نن موږ د بدلون، نوښت او خپلولو په اړه خبرې کوو.
Previous ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ |